Ungazoba njani izilwanyana inyathelo ngenyathelo kwaye ngokulula ngala maqhinga | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 03/02/2021 20:49 | Ukuhlaziywa ukuba 03/02/2021 20:56 | Ukuphefumlelwa
Ukuzoba akunzima. Kodwa musa ukwenza impazamo; ukuzoba kakuhle akukho lula nako. Kukho abo banobugcisa obuninzi kwaye nabo babenza ngcono. Kule meko, zombini isitayile kunye nomnqweno oshukumisayo ukuba wenze impembelelo yemizobo. Kwaye enye yeyokuqala, kwaye enye yezona zilula "ukuziqeqesha" kukufunda indlela yokuzoba izilwanyana. Isizathu kukuba phantse zonke zinemilo esisiseko kwaye, ukuyichonga, ungaphezulu kwesiqingatha somzobo owenziweyo.
Ukuba ufuna funda indlela yokuzoba izilwanyana, Kungenxa yokuba uyayithanda, kuba unabantwana abancinci abakubuza ukuba ubazobe njani kwaye awufuni ukusilela kubo, okanye ukufunda nje okutsha, namhlanje siza kukunceda wazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwathabathile yiphumeze. Mhlawumbi imizobo yokuqala ayizukuhamba kakuhle, kodwa unyamezelo, umonde kwaye ngaphezu kwako konke ukuziqhelanisa kuya kukwenza inkosi yemizobo yezilwanyana.
1 Izitshixo zokwazi ukuzoba izilwanyana
2 Ukuzoba njani izilwanyana inyathelo nenyathelo ngeemilo zejiyometri
2.1 Qala ngentloko
2.2 Zoba umzimba
2.3 Joyina intloko nomzimba
2.4 Gxila entloko
2.5 Yongeza imilenze
2.6 Sula izangqa kunye noxande
3 Ungazoba njani izilwanyana: ubuso
4 Ungazoba njani izilwanyana ezizizo
5 Uhamba njani kwimizobo esisiseko yezilwanyana uye kwi-hyperrealistic
Izitshixo zokwazi ukuzoba izilwanyana
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukwazi ukuzoba izilwanyana kuyahamba zichonge ukuba zeziphi iindlela ezisisiseko zezi. Kwaye ukuba, xa uzijonga izilwanyana, zinokukukhumbuza ngeemilo zejiyometri. Umzekelo, intloko yekati ingaba sisangqa; umzimba, okweqanda; kunye nomsila uxande oluxubileyo. Ngale ndlela imiselweyo, unokwenza imigca echaza umzimba wezilwanyana ngolu hlobo. Kwaye ke, fumana iziphumo.
NgokukaPierre Pochet, "Njengomzimba womntu, umzimba wezilwanyana ezininzi ungophulwa ube ziifom ezilula". Zithini ezo milo? Eyona isisiseko: isikwere, unxantathu, isangqa kunye noxande. Ngamanye amaxesha isangqa se-oval sasiza kungena.
Apha sikushiya eminye imizobo yezilwanyana eyenziwe ngeemilo zejiyometri ukunika umbono wokuba kunjani. Kwaye kukuba, njengomntu, babelana nathi ngeendlela zokuzoba.
Esinye isitshixo ekufuneka usithathele ingqalelo sokuzoba kukuba nesalathiso. Xa kuziwa ekuzobeni izilwanyana, oku kunokwenziwa ngeendlela ezahlukileyo, kodwa xa uqala ukujongana nomzobo, kufuneka ube nesalathiso sendlela ofuna ukuba ube yiyo. Ngale nto asitsho ukuba uza kukopa enye esele yenziwe, kodwa siyayibona njengesiseko sokwazi into ekufuneka uyibekile kulo mzobo ukuze ibonakale ngathi sisilwanyana osifunayo.
Ukuzoba njani izilwanyana inyathelo nenyathelo ngeemilo zejiyometri
Khawufane ucinge ukuba kuya kufuneka uzobe inja, ikati, inkomo ... Kodwa awazi ukuba ungayenza njani. Nangona kunjalo, engqondweni yakho ngokuqinisekileyo unawo umzobo; ingxaki kukuyivelisa kwakhona ephepheni. Ke ngoku sikunika amanyathelo ekufuneka uwathathile:
Ukwenza oku, zoba isangqa. Oku kufanele ukuba kube bubungakanani ofuna ukuba umzobo ube ngabo. Gcina ukhumbula ukuba kufanele ukuba kukhulu ukuba isilwanyana ositsalayo sikhulu. Yakha kwimilinganiselo "yokwenene" yezilwanyana. Umzekelo, ukuba uzoba indlovu, isangqa siya kuba sikhulu kunokuba uzobe imouse.
Okulandelayo, uya kuwufuna umzimba. Oku kuhlala kwenziwa ngoxande, nangona zineekona ezijikeleziweyo (ziya kufana nesangqa esoluliweyo)
Joyina intloko nomzimba
Ukuba awuyipeyinti ingxande ecaleni kwesangqa, kuyakufuneka uyijoyine ngemigca elinganisa imilo okanye uboya besilwanyana. Oku kuhle ngokuthe ngqo kuba awudingi ukuba 'yenze ibonakale intle', beka nje ezi milo zimbini ekuqaleni.
Zoba isicheme, umboko, impumlo, iindlebe ... Oko kukuthi, olona phawu lwesilwanyana ulukhethileyo. Kodwa kuphephe ukubeka ezinye iinkcukacha, gcina ezo zokugqibela.
Beka ezingaphambili kuqala ze emva kwezasemva. Ke, ezokuqala ziya kusebenza njengesalathiso sokwenza ezingasemva (kuba ukuba nenxalenye yentloko kulula ukuba wazi ukuba ziya kuba nde kwaye zibanzi kangakanani.
Sula izangqa kunye noxande
Ngoku ukuba unesiseko, ungaqhubeka nokugqiba umzobo, kwaye oko kuthetha ukuzoba «izincedisi», nokuba ngumsila, uboya, amehlo ...
Ungazoba njani izilwanyana: ubuso
Ukufunda ukuzoba ubuso bezilwanyana, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona ilula, ngakumbi kwezincinci. Kwaye ukuba zonke izilwanyana zinokutsalwa ngeefomula zejometri, nokuba sisangqa, isikwere, unxantathu ...
Ukuyithatha njengesiseko, ungakha iimilo ezahlukeneyo. Sishiya eminye imizekelo.
Amanyathelo okuzoba ubuso besilwanyana obuneemilo zejiyometri
Sichaza ngezantsi indlela yokuzoba izilwanyana, ngakumbi ubuso, ukuze ubone ukuba yeyona ilula ukufezekisa:
Kuqala, zoba isangqa okanye isikwere.
Ngaphandle koku, beka iiqanda ezimbini ezizakuba ziindlebe zesilwanyana. Kuxhomekeke kwinto oyibekayo, ezi ndlebe ziya kuba nkulu okanye zincinci.
Yenza i-arc ngokungathi wahlulahlula isiqingatha sesangqa okanye isikwere kwisiqingatha. Apha ngezantsi komgca zoba isangqa esincinci. Iya kuba yimpumlo yesilwanyana sakho. Ngaphezulu kwe-arch, beka amehlo esilwanyana.
Ngoku kufuneka ubeke umlomo wakho.
Kuxhomekeka kwisilwanyana osikhethileyo, la manyathelo aya kuba made okanye amafutshane, kuba wakuba unesiseko kufuneka ujonge kwiinkcukacha ukuze usinike imilo ofuna ukuyifezekisa.
Ungazoba njani izilwanyana ezizizo
Xa ufunda ukuzoba izilwanyana ezizizo, khumbula ukuba ngelixa oku ngentla kunokukunceda, iseyinto "esisiseko," kwaye imizobo eyiyo ifuna inyathelo elinye ukuya phambili. Kule meko, ayisiyiyo kangako imilo esisiseko apho unokuyilungisa khona, kodwa nakwi-anatomy yesilwanyana.
Ngokomzekelo, ukuba into oyifunayo kukuzoba inja eyiyo, kuya kufuneka uyazi ukuba kunjani ngaphambili. Ngaba uyazi ukuba inamathambo angama-321? Kwaye umzimba wakho wohlulwe wangamacandelo amathathu, ngalinye linempawu zalo?
Ngokukodwa, kuya kufuneka ujonge:
Kwintloko, eya kwahluka ngokuxhomekeke kubuhlanga okhethe ukuzoba. Kuyo kufuneka ugxininise
Emzimbeni, hayi kuphela umva, isinqe kunye nomsila, kodwa nenxalenye yentamo.
Imida, ngaphambili nangasemva.
Uhamba njani kwimizobo esisiseko yezilwanyana uye kwi-hyperrealistic
Akunakuphepheka ukuthandana nemizobo ebonakala ngathi iphila, inyani kangangokuba inokubonakala ngathi iifoto zokwenyani. Kodwa ukuya apho, kufuna ukuzinikezela okukhulu. Ke ukuba injongo yakho kukufezekisa ezi ziphumo, eyona nto unokuyenza kukuziqhelanisa nokufunda nzima.
Onke amagcisa aqala ukwenza ezinye izinto. Kule meko, unako funda indlela yokuzoba izilwanyana ezisisiseko kuba, njengoko ufunda ubuchule, ukwandisa ubunzima Kude kube ufumane oko ukufunayo, loo mifanekiso iyinyani iya kuchukumisa wonke umntu.
Oku kusekwe kwiinkcukacha zesilwanyana ngasinye, ukuzisa "ubomi" kulo mzobo. Kodwa, ngenxa yoko, kubalulekile ukuba uqale ufunde iziseko zokuqhubela phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uzoba njani izilwanyana